Izinsiza kusebenza - UFujian Shengyang Pipeline Technology Co, Ltd.
Ulayini wokukhiqiza osezingeni eliphakeme
Ulayini omusha wokukhiqizwa kwamapayipi owamukelwe yi-Shengyang Technology ulungele ukukhishwa kwamapayipi ahlukahlukene e-polyolefin. Ulayini wokukhiqiza unezinga eliphakeme lokuzenzekelayo, ukukhiqizwa okuzinzile nokunokwethenjelwa, futhi kunganikeza ungqimba lwangaphakathi nolwangaphandle lwenhlanganisela kanye ne-multilayer composite ipayipi extrusion yamapayipi amakhulu wobubanzi.
I-Shengyang Technology ine-advanced injection injection machine machine enenqubo eqondile yokulawula, okukhipha okuphezulu nekhwalithi ezinzile. Iqoqo eliphelele lesikhunta sokulinganisa ipayipi liyatholakala kumakhasimende.
Imishini eqondile yokushisela ama-angle amaningi iqeda ukufakwa kwamapayipi amakhulu.
Ukuhlolwa kwekhwalithi eqinile
I-Shengyang Technology isebenzisa ngokuqinile uhlelo lwe-ISO9001: 2008 lokuphatha ikhwalithi futhi inamathela ekubalulekeni kokucubungula ukulawula. Ukuze kuqinisekiswe isiqalo esiphakeme, amazinga aphezulu, isikhungo sokuhlola sinemishini yokuhlola ephelele nemishini yokuhlola. Kusuka kokuphilayo kuya kumikhiqizo eseqedile, ukuhlolwa okuqinile kwenziwa njalo emahoreni ayisishiyagalombili. Ukuhlolwa kokuhlolwa komthelela wesando nokuhlolwa kwe-Vicat. Lezi zivivinyo ziqinisekisa ukuthi sisebenzisa izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme kakhulu futhi sikhiqiza imikhiqizo ehlangabezana namazinga. Imikhiqizo ye- "Shengyang" imakwe ngokuqinile ngamashifu okukhiqiza nezinsuku zokukhiqiza, ukuze ikhwalithi yomkhiqizo ibhekwe futhi ilandeleke.